Mpanamboatra sy mpamatsy seza misy kodiarana | China Factory Fananganana seza misy kodiarana
Fananganana sezakodiadia famolavolana manokana ho an'ny sembana ary ny fananganana kilemaina dia afaka manampy anao ireto olona sembana hiakatra mora tohatra ireto. Ny fitaovana dia mampiasa rafitra fanaraha-maso marani-tsaina, rafitra fanaraha-maso marolafy, modular ary tambajotra izay afaka manodina angon-drakitra, mahatonga ny rafitry ny fiasan'ny ascenseur ho marin-toerana kokoa.
Fampiasan-trano hipetrahan'ny mpamatsy seza misy kodiarana miaraka amin'ny vidiny ara-toekarena
Ny fiakarana amin'ny seza misy kodiarana dia natao ho an'ireo sembana, izay mety amin'ny tohatra misy kodiarana miakatra sy midina amin'ny tohatra na amin'ny ambaratonga fidirana amin'ny varavarana. Mandritra izany fotoana izany dia azo ampiasaina ho ascenseur kely any an-trano ihany koa izy, mitondra mpandeha hatramin'ny telo ary mahatratra ny haavon'ny: 6m.
Raha tsy manana toerana ampy hametrahana fiakarana seza misy kodiarana mitsangana ny tranokalanao, dia ny seza misy kodiarana karazana hety no ho safidinao tsara indrindra. Izy io dia mety indrindra amin'ny fampiasana amin'ny toerana misy tranokala voafetra. Raha ampitahaina amin'ny fiakarana amin'ny seza misy kodiarana mitsangana, ny seza misy kodiarana hety
Mandritra izany fotoana izany dia ampiasaina ny milina maharitra mientanentana tsy mihetsika gearless, izay manatsara ny tahan'ny fampiasana ny trano sy ny fahombiazan'ny fiara. Ny herinaratra famatsiana herinaratra dia azo namboarina sy mifanaraka mifanaraka amin'ny volan'ny mpanjifa eo an-toerana. Ny kapila vita anaty kapila dia mahatonga ny fiasan'ny ascenseur ho azo antoka kokoa, ny habeny dia kely kokoa noho ny motera nentin-drazana nentim-paharazana eo ambanin'ny enta-mavesatra iray ihany, ary ny fiakarana tombo-kase tsy mila fanosorana diloilo. Raha mila ity fiakarana sembana ity ianao dia omeo anay ny haben'ny latabatra, ny enta-mavesatra ary ny haavon'ny haavony, ary koa ny tena sarin'ny toerana fametrahana azy manokana, ary handamina mpamorona matihanina hamolavola sy hamboarina mifanaraka amin'ny zavatra ilainao manokana izahay.